Apple 1 oo uu saxeexay Steve Wozniak waa la xaraashay | Waxaan ka socdaa mac
Apple 1 waxaa saxiixay Steve Wozniak ilaa xaraashka
Dhamaanteen waan ognahay qofka uu yahay Steve Wozniak, oo ah aasaasaha shirkadda Apple oo uu weheliyo Steve Jobs. Mid ka mid ah dhacdooyinka muhiimka ah ee ay labadoodu gaareen ayaa ahaa dhismaha Apple 1. Kombuyuutar shaqsi oo aad u gaar ah. Maalmahan waxay gaari kartaa tirooyin aad u sarreeya xaraashka, gaar ahaan haddii si wanaagsan loo daryeelo oo ay shaqeyso. Haddii aan ku darno labadaas shuruud saxiixa mid ka mid ah abuurayaasheeda, waxaan leenahay qorshaha ugu fiican ee lagu gaari karo tirooyin aad u sareeya.
Aynu sameyno taariikh yar oo aan waligeed waxyeellayn. Apple 1 wuxuu ahaa kumbuyuutar shaqsi ah oo ay sii deysay Shirkadda Apple Computer (hadda Apple Inc.) 1976. Waxaa qaabeeyay oo dhisay Steve Wozniak iyo Steve Jobs. Kumbuyuutarka lagu iibiyay qiimo ah 666,66 Dollar (Whims of Wozniak oo jeclaa inuu ku celiyo lambar) bishii Luulyo 1976.
Haatan kumbuyuutar Apple 1 ah oo uu saxiixay Steve Wozniak Waxay u kacaysaa xaraashka iyada oo qiimaha bilowgu yahay $ 50.000. Laakiin dabcan maahan sababta oo ah shirkadda oo keliya, laakiin sababta oo ah waxay ku sugan tahay xaalad qumman dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay ee hawlgalka u baahan. Maxaa intaa dheer u baahan tahay inaad ku darto sanduuqa dhoofinta Apple ee asalka ah taas oo ku jirta isla xaalad dayactir wanaagsan.
Kombiyuutarkan Apple-1 waxaa dib loogu soo celiyey asalkiisii ​​iyo shaqadiisii ​​bishii Sebtember 2020 Corey Cohen, khabiir ku ah Apple-1, iyo fiidiyowga uu ku shaqeynayo ayaa la heli karaa markii la codsado. Tartamayaasha u qalma waxay leeyihiin warbixin dhameystiran oo ku saabsan xaaladaha farsamo ee ay diyaarisay Cohen. waan ogahay wuxuu qiimeeyaa xaalada hadeer wado ee 8.0 / 10. Marka laga reebo jiritaanka sanduuqa maraakiibta asalka ah ee dhifka ah, mid ka mid ah xulashooyinka iyo sanduuqyada yar ee maanta la yaqaan, qaabka ugu caansan ee kumbuyuutarkan Apple-1 ayaa ah in loo diiwaangeliyey inuu si buuxda u shaqeynayo: nidaamka qaldan-free socday ugu yaraan sideed saacadood imtixaan buuxa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Apple 1 waxaa saxiixay Steve Wozniak ilaa xaraashka
MagSafe Duo wuxuu ku dhici karaa suuqa 21-ka Diseembar